Home Wararka Fadeexad ka dhalatay deeqdii waxbarashadda ay Taiwan siisay Somaliland
Fadeexad ka dhalatay deeqdii waxbarashadda ay Taiwan siisay Somaliland
Taiwan waxay sanad kasta bixisaa deeqo waxbarasho oo kala geddisan kuwaasi oo ay ugu caansan yihiin TaiwanICDF scholarship iyo MOFA scholarship. Haddaba u kaalay Taiwan ICDF oo ah deeq waxbarasho oo gebi ahaanba kharashaadka ardayga la kafaalo qaado (Fully funded scholarship).
Hadaba arday kamida ardayda oo magaciisa ku soo koobay Muxumed ayaa siaan sheegay
“Aniga iyo tartamayaal kale ayaa waxa aanu markaliya kuwar helnay in Safaaradda Taiwan ee Hargeisa ay toban cisho kohor oo ku beegnayd Sabtidii 2-da April 2022 ay u yeedhay 20qof oo ay sheegtay inay yihiin guulaystayaashii ay Hay’adda ICDF usoo gudbisay yadoo isla maalintii shalay ahaydna ka qaadday Imtixaan ay ku xulatay 7 qof oo kamid ah 20kii qof ee loo yeedhay. Ogow oo hay’adda ICDF iyo Jaamacadaha kuyaala Taiwan midkoodna ma soo gudbinin liis guulaystayaal ah oo lamaba gaadhin wakhtigii ay gudbin lahaayeen taasi oo ah 31ka bisha shanaad. Intaas kaddib waxa aanu la xidhiidhnay safaaradda, waxa aanay noo sheegeen in: hay’adda ICDF usoo gudbisay liiskii guulaystayaasha; isla markaana intaxaankii laga qaaday oo 7 qof soo bexeen, CAJIIB!.
Haddii Alle idmo, marka la gaadho 31-ka bisha shanaad waxa hay’adda ICDF soo saari doontaa liiska guulaystayaasha xalaasha ah taasi oo lala soo wadaagi doono Safaaradda Taiwan ee Hargeisa si ay guulaystayaashaas u dhashay Somaliland ula xidhiidhaan oo u ogaysiiyaan in ay guulaysteen laakiin nasiib darro cid la xidhiidhi doontaa ma jirto oo waxa lagu beddeli doonaa dadkii bishii 3aad iyo 4aad lasii diyaarsaday, kuwaasi oo ICDF looga dhigi doono kuwii xalaasha ahaa, kumana dhawaaqi doonaan guulaystayaasha gacan ku rimiska ah ilaa la gaadho 1-da bisha lixaad ee sannadkan, Oo imikaba waa u diyaare may ku dhawaaqaan? Ku dhawaaqi maayaan imika waayo waxa fashilmaya musuqa, ICDF-na way ogaanaysaa.”
Previous articleMaxa ka soo baxay kulankii Madaxda DG Jubbaland & James Swan ee kuraasta Gedo?
Next articleRooble oo lagu amray inuu sii daayo 3ta kursi ee laga soo doorto Koonfur Galbeed
Qaar kamida ciidankii gadooday oo u guuraya meel aan ka fogaynin...
MW Deni oo isbeddel ku samaynaya hoggaanka Maxkamadda Ciidamada